नेपाली सेनाको ट्रक दु’र्घटना, के छ अबस्था ? - Mitho Khabar
November 15, 2021 mithokhabarLeaveaComment on नेपाली सेनाको ट्रक दु’र्घटना, के छ अबस्था ?
गोरखामा नेपाली सेनाको ट्रक दु’र्घटनामा परेको छ । अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेकमा तालिमा प्रयोग हुने सामग्री पु¥याएर फर्कने क्रममा ट्रक दु’र्घटना भएको नेपाली सेनाका मेजर प्रकाश परियारले बताए ।
लु १ ग १३९ नम्बरको ट्रक सिरानचोक गाउँपालिका ५ भालुमारा भन्ने ठाउँमा सडकबाट करिब ३० मिटर तल खसेको छ ।ट्रकमा चालक र एक जना कमाण्डर रहेको उनले बताए । दुबै जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको र ट्रकमा धेरै क्षती भएको छ । ब्रेक फेल भएर दुर्घटन भएको उनले बताए ।
सडकबाट ख’सेको ट्रक निकाल्ने प्रयास भईरहेको छ ।उता राैतहटमा कार दु’र्घटना हुँदा सवार ४ जना भारतीय नागरिकको मृ’त्यु भएको छ । गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डको यमुनामाई गाउँपालिकास्थित झुन्खुन्वा चोकनजिक शनिबार राति भारतीय नम्बरको कार दु’र्घटना हुँदा सबार ४ जना भारतीय नागरिकको मृ’त्यु भएको हो ।
शनिबार राति करिब सवा १० बजेको समयमा यू.के.१२ सी २९०० नम्बरको भारतीय कार झुन्खुवा चौकदेखि उत्तरपट्टि रहेको पेट्रोलपम्प नजिक तीव्र गतिमा आइरहेको बेला अनियन्त्रित भई सडकपेटीभन्दा करिब २० मिटर तल पानीमा डु’बेको थियो । त्यस पछि कारभित्र रहेका चारै जना बाहिर निस्कन पाएनन् ।
कारको सबै भाग पानीमा डु’बेपछि भित्रका मानिसहरु नि’सास्सिएर मृ’त्यु भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय राैतहटले जनाएकाे छ । मृ’तक चारै जनाको श’व पो’स्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल गौरमा राखिएको छ ।
क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागी क्यालिफोर्निया बाट रु ७,७७,६६६ सहयोग प्रदान